ज्यानै जाने छाउपडीको पीडा
भर्खर नगरपालिका बनेको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगर, लैनचोरकी तुल्सी शाहीलई महिनावारी भयो । उनलाई छाउगोठमा सुत्न पठाइयो । राति छाउगोडमा सपै पसेर उनलाई डस्यो र उनको मृत्यु नै भयो । छाउपडी पश्चिम पहाडको ठूलो समस्या हो । नगरपालिकामा त यस्तो हालत छ भने बिकट गाउ“हरुमा छाउपडी समस्या कति बिकराल होला ?
सरकारले गाउ“पालिका र नगरपालिकाको चुनाव गराइसकेको छ । ती प्रमुख, मेयरहरुलाई, सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई छाउपडी अर्थात महिलाको महिनावारी समस्याका बारेमा चेतना जगाउने र छाउगोठ भत्काउन प्रेरित गर्ने कार्यक्रम ल्याइहाल्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा छाउगोठमा सुत्नुपर्दाको पीडा, सर्पले डसेर मर्नुपर्ने बाध्यताका सिकार अनेक तुल्सी शाहीहरु हुनेछन् ।
छाउगोठमा तुल्सी शाहीलाई सर्पले डसेर मारिसक्यो, देशका प्रधानमन्त्री भन्छन्– सपैमाथि नै मुद्दा चलाइनेछ । के भनेको यो ? डडेलधुराका निवासी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई छाउगोठको समस्या थाहा छैन र ? उनले यति हलुका रुपमा जनताको जीवनलाई व्यङ्ग हान्नु भनेको प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो अक्षमता हो ?
घटना गत विहीवारको हो । ६ दिनमात्रै भयो । यो घटनाले संसदका महिला सांसद र जनप्रतिनिधि बनिसकेका महिलाहरुलाई दुख्नुपर्ने हो । जे जति महिलाहरु चुनाव जितेर जनप्रतिनिधि बनेका छन्, तिनले यस्ता कुरिती, कुसंस्कार र अन्धविश्वास हटाउन भूमिका खेल्ने, कार्यक्रम ल्याइहाल्ने घोषणा गर्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म महिलाहरु महिलाका समस्याप्रति उदासीन छन् । किन ?
अचम्म, तुल्सी शाहीलाई छाउगोठमा सर्पले डस्यो । परिवारजनले थाहा पाए । उनलाई डाक्टरी उपचारको बदलामा धामीझा“क्री लगाइयो । अन्ततः सर्पको विषका कारणले उनको मृत्यु भयो । नगरका मेयर सूर्यबहादुर शाहीले यसै भनेका छन् । यस्ता मेयरहरुलाई सर्पले टोकेपछि धामीझा“क्री होइन, डाक्टरी उपचार गर्नुपर्छ भनेर तालित दिन जरुरी छ । अन्यथा यस्ता घटना घटिरहनेछन् र छाउगोठको कहालीलाग्दो समाचार आइरहनेछ ।
भन्नलाई मेयरले स्वास्थ्यकेन्द्र टाढा पर्छ, एम्बुलेन्स थिएन । यहीकारण शान्ताको मृत्यु भएको हो । घटनापछि अनमीहरुले पनि उपचार नपाएर मृत्यु भएको बताएका छन् । नगरपालिकामा छाउपडी प्रथा कायम हुनु भनेको नगरकै अपमान हो । महिनावारी भएकी महिला घरभित्र पस्दा देउता रिसाउने र अनर्थ हुने अन्धविश्वासका कारण स्थानीयले महिनावारीको वेलामा महिलालाई सात दिनसम्म घरभित्र पस्न दिदैंनन्, गोठमा कोचेर राख्छन् ।
यस्तो अन्धविश्वास ? छोगोठमा सुतेकी तुल्सीको अकालमै ज्यान गुमेको कारण यही हो । छापउडी विरुद्ध विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले अभियान पनि चलाएका छन् । तर अभियानले कुनै प्रभाव पारेको देखिएन । पैसा सक्ने र अनियमितता गर्ने अभियान प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । अहिले पनि प्रदेश ६ र ७ का पहाडीका गाउ“ नगरहरुमा छाउपडी प्रथा कायमै छ ।